'Vhara Rings Yako' ndicho chikamu chitsva pawebhusaiti yeApple kukukurudzira iwe kushandisa iyo Apple Watch | Ndinobva mac
Iine Apple Watch Series 2 yakaburitswa gore rapfuura naApple, iyo kambani yakaburitsa akateedzana emavhidhiyo akadaidzwa zvakafanana neayo webhusaiti ivo vachangotangisa paApple.com. Iyi inzira yekukurudzira vashandisi kuti vavhare mhete dzese dzeApple Watch.
Muchiitiko ichi, ndezvekuva nehupenyu hune hutano uye hatigone kuti chinhu chakaipa kune vashandisi, asi chakapesana. Ichokwadi kuti iyo Vhara Yako Rings mushandirapamwe haisi nyowani kune vazhinji veavo varipo, asi kuve nechikamu chino pawebhu zvirokwazvo wedzera vamwe vanhu kuzvikurudzira uye kupedzisa mawadhi ekurovedza muviri.
Aya ndiwo mamwe emavhidhiyo akaburitswa neApple munguva yakapfuura kushambadzira mushandirapamwe weApple Watch Series 2, iyo yakasvikawo chaizvo pamwedzi uno waKukadzi asi wa2017:
Mariri, sekune Apple webhu chikamu, iro Chiitiko uye maekisesaizi mhete anomira kunze. Mazuva mashoma apfuura, vashandisi vakapihwa chiitiko chitsva chebudiriro chinonzi "Mwedzi weMoyo", umo vashandisi vakahwina mubairo uye zvimwe zvekunamatira zadzisa iyo Exercise mhete kwemazuva manomwe akateedzana mumwedzi waKukadzi. Kunyangwe iwe uchizvida kana kwete, kuva neizvi zvibudiriro kunoguma kukukochekera iwe kumatambudziko uye zvishoma nezvishoma avo vasingamboite kurovedza muviri kuenderera mberi nazvo uye kutanga nazvo. Ehezve kuita chiitiko chemuviri kwakakosha kumuviri wedu uye Apple yakanyanya kutarisisa pazviri nguva pfupi yadarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » 'Vhara Rings Yako' ndicho chikamu chitsva pawebhusaiti yeApple kukukurudzira iwe kushandisa iyo Apple Watch